Music » နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်ခြောက် – Alex – Like we used to (အရင်လို)	31
မြစပဲရိုး says: ရွာထဲ တိတ်နေတုန်း အရီး တစ်ယောက် သူငယ်ပြန်ကြည့် နေသည်။ ဝင်နိုင် စွမ်း ရှိသူများ ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ့် သင်္ကြန် အလွမ်း အတိတ်လေးများ ဟ ပြီး အသံလေးများ ပြု ကြပါ။
သရဲခြောက် မစိုးလို့။ အရင်လို – အဲလက်စ်
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကျ​နော်​ မ၀င်​သွားဘူးခီည
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အပျို ဖြူ ငယ်ကကျွမ်းမို့ … လွမ်းတုံ့တင် … ။
pooch says: လွမ်းချင်​ပါတယ်​အရီးအခု​တော့
သများတို့ ဂျ​လေဘီအုပ်​စုက​တော့ အ​ပျော်​လာတက်​တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ဆရာသော်တာဆွေရေးဖူးတာလေးအမှတ်ရတယ်..။
နောက်ကလေးတွေ ဂျန်နရေးရှင်းများရောက်ရင်.. ဇာတိကမ္ဘာဂြိုလ်ကို… ပြန်ရင်..။ အိမ်ပြန်ခဲ့ရင်… ။ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်… များဖြစ်ကြမလားမသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
မြစပဲရိုး says: မောင်ဂီ
လုံမလေးမွန်မွန် says: သင်္ကြန်ဇာတ်လမ်း မရှိခဲ့ပါဘူး အရီးရယ်..
အရီးဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ပြီး.. ဝင်ခံစားမိသွားတယ်… ဆုံနေလျက်နဲ့ လွဲလေခြင်းများလားလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: လုံမ အရီး က လိုချင်ပြီဆို အလွတ် ဘယ်ခံ မလဲ။
လုံမ လဲ လိုရင်ပြော။ ကူ မယ်ဟေ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မျှစ်ကြော်စာအုပ်ကို အရီးသူငယ်ချင်း ဖတ်နေပြီဆိုလို့ အားတော့တက်သွားပြီ။ တကယ်က မူရင်းနဲ့ တိုက်ဖတ်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မျှစ်ကြော် ရဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ မဟာ့မဟာ ကွန်ဗေးပါ။
ဦးကျောက်ခဲ says: တကယ်တော့ သင်္ကြန်က ကျောက်စ်အတွက်လွမ်းစရာပါ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဲဒါလေး လုပ်ပါဦး ကျောက်စ် ။ ပွဲတောင်းပါတယ်။ မဒမ်ကျောက်စ်ကို ပြန်မပြောပါဘူး။
ဦးကြောင်ကြီး says: နားမီလည်ဗူး.. အံနှဲဒီလော်ဘီ ဒေါမြစံပါယ်ယို ဂေါက်တွားပီးရား..
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: အရီးလတ်ကို ပညာရှိကြီး၊ ထက်မြက်တဲ့အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ အန်တီကြီးအနေနဲ့သိထားတော့ အခုရေးတဲ့
တားအတွက်ကတော့ အချစ်ဆိုတာ ကျောက်စာတချပ်ဆိုရင် ကျိန်စာပါတဲ့ အပိုဒ်တွေမှာ ဖတ်မိဒါဘာဗျာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinn Z says: အဟမ်းးး အခု ရေးထားသမျှ မော်ဒန်မဟုတ်( လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်)း
uncle gyi says: သင်္ကြန်ရင်မခုန်တာကြာပါပကောအရီးရယ်
ဟုတ်မဟုတ် တော့ ပရိုဆရာကြီး များ သိမယ်။ အန်ကယ်ကြီး
ရှိတယ် ဆိုရင် ပြန်နူး ဗျာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: မော်ဒန်ဆိုတာ ဘာနဲ့ပုံဖော်ပြီး ဘယ်လို လုံးဝ လုံးဝမဟုတ်ဆိုတာ
မြစပဲရိုး says: That’s true.
ဦးဦးပါလေရာ says: အခု ၂၀၁၅ မှာ ဗိုက်ပူခါးကိုင်း ထုံထုံထိုင်းထိုင်း အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဟာ
Mr. MarGa says: ​နောက်​နှစ်​မှပဲ
Ma Ma says: ပိုစ့်ိကိုဖတ်
အနားကလူတွေဝိုင်းကြည့်တာတောင် အရီရပ်မရဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: သင်္ကြန် အမှတ်တရတွေမရှိ ကျွန်တော်တောင် လွမ်းလာသလိုလိုပဲ။
padonmar says: မလတ် ပို့စ်တွေကို ခံစားနိုင်မှ ဖတ်မယ်လို့ စုထားတာ။
မြစပဲရိုး says: အစ်မဒုံ အချက် ကို တွေ့လိုက်လို့ အရောင်ချယ်ပြီး ကြောင်စုတ် ကို ပြလိုက်ဦးမယ်။ု
black chaw says: နေနိုင် လျက် နဲ့ မင်းရဲ့ အနား
မြစပဲရိုး says: ကိုချော ရယ် …
lol:-))))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .အင်း…သင်္ကြန်လွမ်းချင်း ပြန်မပြောချင်တော့ပါဘု
.♫♪♫အလွမ်းတွေကို….စမ်းရေထဲမှာမျှောလိုက်ပြီ♪♫♪ …ဒီသီချင်းသာ ဆက်ဆိုကြည့်နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဖိုးသိကြား၊ မမ၊ ကိုပါ၊ မောင်ကာ နဲ့ မိုက်
chate chate says: ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ….
အောင် မိုးသူ says: သီချင်းလေးနဲ့လွမ်းနေတယ်ပေါ့